News - Tianjin Wangtong Industry Iyo Trade Co., Ltd.
Warshadaha Tianjin Wangtong Iyo Ganacsiga Co., Ltd. Lifen Cosmetics Factory waxaa la dhisay 1998, waxay leeyihiin in ka badan 20 sano oo khibrad ah soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaan sameynaa alaabada OEM / ODM oo waxaan leenahay sumad noo gaar ah oo loo yaqaan 'SIMU' oo ah aagga daryeelka maqaarka.
Si loo xaliyo tafaariiqleyaal aad u tiro badan oo raba inay keydiyaan kharashka isla markaana ay leeyihiin alaabooyin wanaagsan iyo xirmo wanaagsan isla mar ahaantaana, MOQ aad u hooseeya ayaa laga codsaday nooc kasta oo badeecado leh sumad gaar loo leeyahay. Caadi ahaan boqol kumbuyuutar oo keliya. Waxaan ka caawinnay tafaariiqley badan oo yar yar inay ka koraan yaryar iyo weyn. Macno malahan inaad tahay jumladle weyn ama tafaariiqle yar, waxaan ku siineynaa alaab aad u tayo wanaagsan.
Waxaan abuurnay xariiq dabiici ah oo dabiici ah. Waxaan aaminsanahay quruxda iyo xikmada dabeecada inay ku siin karto alaab muuqaal kaa dhigeysa oo qurux dareemeysa - tani waxay ka dhigan tahay waxaan diideynaa in aan isticmaalno wax walboo sumeysan iyo aalkolada maqaarka qalajiya si aan uga dhigno macaashkeena mid sareeya qiimaha maqaarkaaga quruxda badan.
Taabadalkeed, waxaan ka soo qaadannaa nafaqooyinka waxtarka leh ee quruxda iyo xoojinta dhirta dabiiciyan iyo duurjoogta lagu farsameeyay. Kadibna waxaan ku darnaa waxyaabhaas aloe vera, shea butter, iyo saliidaha si qoto dheer u qoya si loo abuuro tayo sare, alaabta daryeelka maqaarka dabiiciga ah.
Waad ku kalsoonaan kartaa in walxo kasta oo aan u adeegsanno si mas'uuliyad leh loo soo helo oo si taxaddar leh loo xusho faa'iidooyinka ay u leeyihiin maqaarka. Isku-darka isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa si qotodheer u nafaqeeya, fuuq-bixiya, nadiifiya oo dib u cusbooneysiiya midabka. Mid ka mid ah sirta ka dhigaysa in alaabteenu wax ku ool noqdaan waa howsheenna socodka bil-dhererka, kuleylka hooseeya. Tani waxay abuureysaa soosaarida dhirta oo ay kujiraan xaddiga ugu badan ee fiitamiinnada iyo nafaqooyinka, taasoo ka dhigaysa alaabtayada kuwo aad u firfircoon. Nidaamkan dabiiciga ah wuxuu kaloo ka dhigayaa alaabteenu kuwo ammaan u ah qof walba inuu isticmaalo, laga bilaabo carruurta ilaa haweenka uurka leh.
Muddada aad ku kobciso maqaarkaaga khadkayaga, caafimaad iyo iftiin badan ayay noqonaysaa. Macaamiisheennu waxay arkeen horumar ballaadhan iyo dib-u-cusbooneysiinta dhismayaashooda sababtoo ah nafaqeynta, qaaciddada isku-dheelitirka maqaarka. Waxaan u tixgalineynaa qaaciidooyinkayaga inay ka badan yihiin daryeelka maqaarka oo keliya. Waxay wataan caraf udgoon iyo qaabab dabiici ah oo bixiya khibrad raaxo leh.
Waqtiga boostada: Apr-14-2021